कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको विजय सुरुवात - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको विजय सुरुवात
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७३, मंगलवार
एजेन्सी, क्यालीफोर्निया । साबिकको बिजेता चिलीलाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका कप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ । मंगलबार विहान भएको खेलमा चिलीलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले सुखद सुरुवात गरेको हो ।
यो जितसंगै अर्जेन्टिनाले अघिल्लो संस्करणको फाइनलमा ब्यहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ । अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित गर्दै चिलीले कोपा अमेरिकोको उपाधि जितेको थियो ।
क्लालिफोर्नियाको लेविस रंगशालामा भएको खेलमा अर्जेन्टिना स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी विना मैदान उत्रिएको थियो । यस्तोमा अर्जेन्टिना र चिलीबीचको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । तर, दोस्रो हाफको ८ मिनेट भित्र दुई गोल गर्दै अर्जेन्टिनाले जित निकाल्न सफल भयो । दुवै गोलको लागी एन्जल डि मारियाको प्रमुख भूमिका रह्यो ।
खेलको ५१ औं मिनेटमा मारियाको गोलबाट अर्जेन्टिनाले सुरुवाती अग्रता लियो । त्यसको ८ मिनेटपछि नै मारियाको पासमा बेनेगाले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि खेलको अन्तिम मिनेटमा चिलीका होजे पेड्रो फ्युनजालिडाले गोल गरेपनि हार टार्न सकेन ।
जितसंगै समुह डी मा अर्जेन्टिना समुहको शिर्ष स्थानमा रहेको छ । उसले ३ अंक जोडेको छ । यस समुहमा समान ३ अंक जोडेपनि पानामा दोस्रो स्थानमा छ । मंगलबार बिहान भएकै खेलमा पानामाले बोलिभियालाई २–१ ले पराजित गरेको थियो ।
Political leaders-artistes soccer match sends message of unity: PM Koirala
June 6. Kathmandu, Prime Minister Sushil Koirala has said the friendly football match between […]
United States and Britain said bomb may have brought downaRussian airliner
LONDON, The United States and Britain said Wednesdayabomb may have brought downaRussian airliner which […]
Another Plane Crash!!!
July 25(Reuters) - Authorities said on Thursday they located the wreckage of an Air Algerie flight after it […]
मेसी भेट्न समुद्रमा एक किलोमिटर पौडी !
एजेन्सी, सेलिब्रेटीहरूप्रति समर्थक र शुभचिन्तको माया कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराको जिउँदो उदाहरण बनेका छन् सुली […]